Wakiilka Daafaca Arsenal ee Hector Bellerin oo xaqiijiyey xiisaha xiddigan uga imaanaya dalka Talyaaniga – Gool FM
(London) 15 Nof 2019. Wakiilka daafaca Arsenal ee Hector Bellerin ayaa xaqiijiyey in xiddiga uu wakiilka u yahay ay xiiso uga imaanayaan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Xiddiga reer Spain ayaa kulankiisii ugu horreeyey horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan saftay kulankii ugu dambeeyey ee ay la ciyaareen Leicester City kaddib markii uu ka soo laabtay dhaawac halis ah oo dhanka jilibka ah ee uu la maqnaa.
Bellerin ayaa heshiiskiisa garoonka Emirates waxa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedka 2022-23, halka loo magacaabay inuu ka mid noqdo kabtannada kooxda macallin Unai Emery.
Daafacan waqtiga dheer la joogay kooxda reer London ayaa u muuqda mid mustaqbalkiisa naadiga ay su’aal soo gashay, waxaana wakiilkiisa Alberto Botines uu shaaca ka qaaday in koox uusan magaceeda carrabaabin oo Talyaaniga ka dhisan ay doonayso saxiixiisa.
“Xilligan la joogo, wuxuu diiradda saarayaa waxqabadka kooxdiisa, wuxuu ka yimid dhaawac xun, wuxuuna ku noqonayaa heerkiisii caadiga ahaa,” ayuu Botines u sheegay Sky Sports Italia.
“Waxa uu jecel yahay Talyaaniga, waxaa durbaba xiiseynaysa koox Talyaani ah, laakiin ma rabo inaan shaaciyo, qandaraas dheer ayuu ku jiraa, ma fududaan doonto in laga kaxeeyo Arsenal, waa Kabgtan ku xigeenkooda, waan arki doonaa sida uu xilli ciyaareedku ku socdo.”
Bellerin ayaa 186 kulan u saftay kooxda Gunners tan iyo markii uu kaga soo biiray naadiga Barcelona sanadkii 2011-kii.
Gabriel Jesus oo shaaca ka qaaday in Manchester City ay wali ku guuleysan karto horyaalka Premier League